I-101 IITATTOO EZIPHOLILEYO ZAMADODA: EZONA ZIBONO ZITATTOO + ZOYILO LWAMAKHWENKWE (2021) - IITATTOOS
Eyona Iitattoos Iitattoos eziPholileyo ezingama-101 zamadoda
Iitattoo ezipholileyo ziza ngemibala emininzi, iimilo, izimbo kunye nobukhulu. Kodwa eyona tattoos yamadoda ifuna ubuchule kunye nemizobo eyahlukileyo. Ngapha koko, izimvo zetattoo ezipholileyo zibonelela ngolungelelwaniso phakathi kokubonakala kwendoda, umyalezo onentsingiselo, kunye nomsebenzi wobugcisa wokuqala. Ngethamsanqa, kukho inani elingenasiphelo loyilo olumangalisayo lweetattoo ezinesitayile kwaye ziyindoda, ekunceda ukuba uze nezakho izimvo zoyilo ezipholileyo.
Nokuba ufuna i-badass tattoo kuba ijongeka intle kuwe okanye unqwenela ubugcisa bomzimba njengendlela yokubonisa, esi sikhokelo siza kukunceda ujonge ezona tattoos zipholileyo emadodeni. Ezi tattoos ezintle zomntu ziya kukukhuthaza ngenene ngezimvo ezintle.
1.2I tattoo elula
1.28UKumkani kunye noKumkanikazi uTattoo
1.29I-Samurai Warrior Tattoo
1.30Norse God Tattoo
MbiniUyifumana phi iTattoo
2.10I tattoo yeqatha
3Eyona Tattoos yaBantu
Xa iitattoo ziqhelekile kule minyaka ilishumi idlulileyo, ukugqiba ekubeni wenze iitattoo akusekho kuphikisana nokukhetha. Endaweni yoko, yindlela entle yokubonisa ubuntu bakho kwaye uqokelele ubugcisa obuhle.
Nangona kunjalo, xa sele uthathe isigqibo sokufumana i-inki okanye uzimisele ukuba ufuna itattoo entsha, icandelo elinzima likukhethela i-tattoo efanelekileyo.
Ngemibono emininzi epholileyo ye tattoo yamadoda, kunokuba ngumceli mngeni ekukhetheni ukuba wenze tattoo emzimbeni wakho kwaye yeyiphi imifanekiso ofuna ukuyijonga ubomi bakho bonke.
Abanye abantu bafuna ukuhlonipha amalungu osapho, ngelixa abanye befuna eyona tattoo ijongeka intle.
Ekugqibeleni, ayizizo zonke iziqwenga ezifuna intsingiselo enzulu; ngamanye amaxesha, kumnandi nje ukonwabela umfanekiso omhle.
Xa ujonga uyilo lwe tattoo olupholileyo, ii-dudes zihlala zicinga ukoyikisa okanye ukoyikisa imifanekiso njengeempawu zobudoda.
Ezi zimvo zibandakanya idemon, Ingonyama , Ingcuka ingwe, inamba , umkhosi, umkhosi, iViking, iqela lesizwe, kunye ukakayi Iitattoos.
Nangona zonke ezi zizimvo ezilungileyo zoyilo olufanelekileyo, imibala kunye nesimbo, zininzi iintlobo zeetatto ezigulayo ekufuneka ziqwalaselwe.
Ukuphefumlelwa, senze igalari yeetattoo ezipholileyo kubafana ukukunceda ukhethe umsebenzi wobugcisa. Fumana ezona zimvo zilungileyo zokuyila ukuze uqalise.
Iitattoos ezincinci kulula ukuzifihla, ke ukuba ufuna itattoo yakho ukuze ube nokuqonda kwaye ugqunywe, uyilo oluncinci lukhetho olukhulu. Kodwa i-tattoo encinci ayithethi ukuba iphantsi, kwaye imizobo emincinci inokuchazwa ngokumangalisayo ukuba unegcisa elinobuchule.
Kukho amawaka eoyile ezincinci zetattoo onokukhetha kuzo ezipakishwe zizonke zinentsingiselo kwaye zenziwe ngemifanekiso eyahlukileyo.
I tattoo elula
Iitattoo ezilula zinokuba nefashoni kunye nefashoni. Kwaye kunye, uyilo oluncinci lunyanzela ukuba uyile xa uhambisa umyalezo onesibindi kunye neempawu ezisisiseko.
Ezala maxesha kunye nezingapheliyo, izimvo ezilula zetattoo zijongeka zibamnyama nezimpunga. Kwaye, unokulingana ezi ngcamango zipholileyo phantse naphi na.
Crucifix kunye I tattoo yomnqamlezo lukhetho olukhethekileyo kumaKristu enkolo. Efanekisela ubuKristu, uYesu, uthando, ukholo kunye nokuhlonela kwakho, ezi zoyilo zinentsingiselo emangalisayo kwaye ziyimbonakalo.
IiTattoos zokhakhayi lolunye loyilo oludumileyo olujikeleze. Ngoluhlu lweentsingiselo, ukusuka ekufeni ukuya ekufeni, imvukelo nokuzalwa ngokutsha, ukakayi ngumfanekiso onokuthi ubandakanywe kuyo nayiphi na into.
Nokuba ufuna ukhakhayi olusengqiqweni, olupheleleyo ngamathambo alungiswe ngokwendlela yokwakheka komzimba, okanye iDia de los Muertos (Usuku lwabafileyo) lukakayi lweswekile, itattoo epholileyo yokhakhayi lukhetho olungaphelelwa lixesha.
Ukubuyela umva kuyilo lwesiko laseJapan, Iitattoo zenamba bonelela ngenkangeleko yeklasikhi eneentsingiselo ezinzulu zenkcubeko.
Njengeempawu zamandla, amandla, ubulumko kunye nokukhuselwa, awukwazi ukungahambi kakuhle ngeyilo epholileyo ye tattoo yoyilo.
Ukuba ufuna i-inki efuzisela amandla, ubukhosi, isibindi, kunye nosapho, a Ingonyama tattoo yinto endiyithandayo.
Ayizongonyama zintle izidalwa ezijongeka zintle kakhulu zenziwe umvambo esifubeni sakho, egxalabeni okanye kwingalo yangaphambili, inkosi yehlathi inokuba sisikhumbuzo rhoqo samandla akho kunye nokunyamezelana kwakho.
Ukubonisa ukuzalwa kwakhona, utshintsho kunye nokubakho, i-phoenix sisidalwa esiyintsomi esinentsingiselo enzulu. Iimpawu zePhoenix ithandwa phakathi kwamadoda athe afumana ilahleko okanye ahamba nobunzima ukuze avele omelele kunakuqala.
I-phoenix ephuma kwi-tattoo yomlotha ingaba yindlela efanelekileyo yokukhumbula uhambo lwakho kunye nesiqalo esitsha.
Isicatshulwa se tattoo yindlela epholileyo yokumela iinkolelo zakho kunye nefilosofi yakho ngaphandle kokuxhomekeka kwimifanekiso kunye nesimboli. Isicatshulwa sinokuba lula, sinzulu, kwaye sijongeka sihle ngesitayile sobugcisa.
Qiniseka ukuba ujonga upelo, intsingiselo kunye notoliko ukuthintela typos kunye neentloni kamva.
Enye yeendlela ezilungileyo zokuhlonipha usapho lwakho ngumvambo. Nokuba ufuna ukufumana amagama abo, imihla yokuzalwa, imizobo, okanye enye into engaqondakaliyo, ukhumbula uthando lwakho kunye noxabiso I tattoo yosapho ingabonakala intle kuwo nawuphi na umntu.
Iinkwenkwezi ziyile uyilo oluthandwayo lwe tattoo iminyaka emininzi kwaye zinokujongeka ngathi zinesitayile kwaye ziyindoda xa zibhalwe ngokufanelekileyo. Ngokufanayo, abafana banokusebenzisa iiTattoo zeenkwenkwezi ukugcwalisa izikhewu kwikholaji enkulu yemifanekiso.
Ukuba ulahlekelwe ngumntu okhethekileyo, itattoo yengelosi yindlela enhle yokukhumbula ubomi babo. Iitattoos zeengelosi zibonisa ukhuselo, isikhokelo, uthando, ukuzalwa kwakhona kunye nenkolo, ngakumbi ukuba ukhetha uyilo lweengelosi eziLondoloziweyo.
Iingelosi zinokufuzisela iinkolelo zobuKristu okanye zibe yindlela ebukekayo yokubonisa ukuzinikela kunye nokukhumbula abo ulahlekile.
Izikhova zimele ubulumko kunye ne-intuition, kwaye zihlala ziboniswa njengabagcini. Ke nokuba uyazingca ngobuqhophololo bakho bengqondo okanye ungathanda umvambo ukukhumbuza ukuba ulumke kwaye ulumke, Umvambo wesikhova luluvo oluhle kubafana.
Imele inkululeko, ukomelela, ubunkokheli kunye nombono, ukhozi yeyona ntaka ibusass. Yindoda kwaye inamandla, ii-tattoo zokhozi zibukeka zimangalisa esifubeni, ngasemva okanye egxalabeni elinomfanekiso ocacileyo.
Ngokufanayo, ukuba uvela e-US, ukumatanisa ukhozi neflegi yaseMelika yindlela yeklasikhi yokufumana tattoo yelizwe.
Iitolo zeTolo ziyaguquguquka, zilula, kwaye zihamba kakuhle. Ngaphandle kwetolo eliqhelekileyo ngentliziyo emele uthando, iintolo zihlala zisetyenziselwa ukumela imeko elungileyo kunye nokuqhubela phambili.
Ukufezekisa i-tattoo yokuqala eya kulungela naphina; zama uyilo lwe tattoo ukubonisa ukuba uphila ubomi bakho ngaphandle kokuzisola.
Iimpawu zegama lelona phawu lubalaseleyo lothando, ukuzibophelela kunye nokunyaniseka. Rhoqo ubhalwe umvambo esifubeni ukuze uhlale usondele entliziyweni yakho, igama loyilo lwe tattoo lubaluleke kakhulu kwaye luthandana.
Ukuba ukhetha igama lentombi yakho, yenza isigqibo ngokucinga. Ukubheja okukhuselekileyo kuya kuba kukuhlonipha usapho nge wavuka okanye ulinde de utshate i-inki igama lomfazi wakho.
Iitattoo zewotshi, kubandakanya iiglasi zeyure, iisundials, kunye neewotshi ezintsonkothileyo, zihlala zibonisa ukufa kunye nokuhamba kwexesha.
Ihlala idityaniswe nekhampasi, imephu, kunye nezinye izinto zobugcisa, iiwotshi zewotshi zinentsingiselo kwaye zinokukhuthaza abafana ukuba babuxabise ubomi.
Imithi luphawu lobomi, ukomelela, indalo, ukukhula, kunye nokuqala ngokutsha. Ngenxa yoku, uninzi lweeTattoo zomthi zimele uMthi woBomi.
Ukuba ufuna i-tattoo yamadoda eyindalo emele ukukwazi kwakho ukumelana nezithintelo zehlabathi, uyilo lwe tattoo lomthi omnyama nampunga kunokuba kufanelekile kuwe.
IGemini luphawu lweenkwenkwezi olumelwe ngamawele abonisa ubume bendalo. Iitattoo zeGemini zibonisa ubunzima okanye ukukwazi komntu ukuba neempawu ezibonakala ngathi ziyaphikisana.
Sebenzisa uphawu lweGemini zodiac njengoyilo ukubonisa ukuba unamacala amaninzi kwaye wahlukile.
Amafu ahlekisa kwaye ayathandeka, ebenza ukuba babe nezimvo zetattoo ezipholileyo kumadoda afuna umsebenzi wokuyila obonisa indalo yazo elula.
Iitattoo zamafu aziboneleli ngentsingiselo kuphela, kodwa ziyaguquguquka ngokwaneleyo ukuba zilingane kulo naliphi na ilungu lomzimba kwaye zifake i-inki ngalo naluphi na uhlobo lwesimbo.
Iitoto zeTaurus ngokubanzi zimele abafana abanesineke, abanyanisekileyo, abasebenza nzima, ababuyiselweyo nabathobekileyo. Ukongeza, olu phawu lwe-zodiac lumelwe yinkomo, ebonisa amandla, isigwebo kunye nothando olusemva kwezi njongo.
Iitattoo zeWolf zimele usapho, ukuthembeka, ukomelela ngamanani, kunye nethuku lokusinda. Iingcuka zenzela imibono epholileyo ye tattoo yezilwanyana.
Nokuba uchonga njengengcuka yodwa ekhala enyangeni okanye uziqwalasele njengendoda ethembekileyo yosapho eyinkokeli yepakethi yakho, uyilo lwe tattoo luyakubonisa amaxabiso akho ngendlela engapheliyo.
Ngokufana ne-tattoo yomnqamlezo, ii-tattoos zobuKristu zibonisa ukuzibophelela kwendoda kuThixo. Njengendlela yokunxiba ngokoqobo ukholo lwakho kwimikhono yakho, iisimboli zobuKristu zibandakanya ukuthandaza ngezandla, umnqamlezo, irosari, uYesu emnqamlezweni, iingelosi, iivesi zebhayibhile, njl.
Uyilo lwe tattoo lobuKristu lunokuba ngumrhumo wale mihla kwiinkolelo zakho ezinzulu zonqulo.
IiCeltic tattoos ziimpawu zakudala kwinkcubeko yaseYurophu, ngakumbi iIreland, iScotland, isiNgesi kunye neWelch. Iqhina leCeltic uyilo olubonakalayo olunomdla olutyebileyo olunentsingiselo ezininzi.
Eyona nguqulelo ixhaphakileyo kukuba ubomi abunasiqalo okanye isiphelo, kunye nonxibelelwano olungunaphakade phakathi kokomoya nokokwenyama. Olunye uyilo oludumileyo lweCeltic tattoo, iCladdagh imele uthando, ubuhlobo kunye nokunyaniseka.
I tattoo yedemon ibonisa ukuvukela, ukulingwa kunye nokufa. Nangona kunjalo, kwelona nqanaba lisisiseko, uyilo lweedemon luyothusa kwaye luyoyikisa, yiyo loo nto abafana befumanisa ukuba bapholile kakhulu ukufumana i-inki emqolo, esifubeni, egxalabeni okanye engalweni.
Ukuba unesiphiwo somculo, itattoo yomculo yindlela entle yokubonisa uthando lwakho. Amanqaku omculo yinto entle kwaye elula ukuba ufuna into encinci. Ngaphandle koko, unokuhlawula umculi wakho owuthandayo, ingoma okanye isixhobo ngesiqwengana esikhulu.
Iitattoo zeentsiba zihlala zisetyenziselwa ukubonisa inkululeko, ukuhamba, kunye nesibindi, ke ukuba ungumntu othanda ukuzonwabisa okanye uxabise inkululeko yakho yobuqu, uyilo lwe tattoo lweentsiba lunokulungela wena.
Iitattoo zomqhele ziimpawu ezinamandla zobunkokeli, igunya kunye namandla. Ukuba ufuna isikhumbuzi samandla akho angaphakathi, ufuna ukuziva njengokumkani, okanye ungathanda ukuba umhlaba ubuxabise ubukhulu bakho, jonga uyilo lwe tattoo yesithsaba.
UKumkani kunye noKumkanikazi uTattoo
Ukutshatisa iiTatoo zokumkani kunye nokumkanikazi kumnandi kwizibini ezitshatileyo. Nokuba ungumfana nentombi, indoda nomfazi, okanye nabuphi na ubudlelwane apho ufuna ukwabelana ngothando lwakho nehlabathi, emva koko ujonge oyena kumkani kunye nokumkanikazi oyile uyilo.
I-Samurai Warrior Tattoo
AmaSamurai ayengamanye amaqhawe anamandla, ahloniphekileyo kwimbali. Ngokufana nokunyaniseka, ukuthobeka, isibindi, ubuchule kunye nembeko, ii-samurai warrior tattoos zikhuthaza amadoda ukuba azabalazele ezi njongo.
Oothixo baseNorse babezinkokheli zeVikings. Ezirhabaxa, eyindoda, eyomeleleyo kunye nenogonyamelo, iiTattoos zikaThixo waseNorse, iiViking Warriors, kunye neempawu zeNordic zihlonipha kwaye zinika amadoda into ayinqwenelayo.
Uyifumana phi iTattoo
Nje ukuba uthathe isigqibo malunga noyilo lwe tattoo olufunayo, inyathelo elilandelayo kukuthatha isigqibo sokuba uyifumana phi itattoo. Ukuba le yitattoo yakho yokuqala, unendawo eninzi yelaphu onokukhetha kuyo. Kodwa abafana abaneendlela ezininzi zoyilo kuya kufuneka bacinge ngendlela yokufaka ubugcisa obutsha emzimbeni wabo.
Oku kulandelayo kufanele ukuba kube sisikhokelo sokusetyenziswa xa ukhetha indawo oza kuyifaka kuyo itattoo.
IiTattoo zemikhono lolunye lolona khetho luthandwayo kumadoda. Nazi igcwele kunye nesiqingatha semikhono ye tattoo, kwaye abafana banokhetho lokukhetha uyilo lwemikhono eligubungela ingalo ephezulu, esezantsi okanye epheleleyo.
Ngokunikwa ubungakanani kunye nokubonakala, i-sleeve tattoo epholileyo inokubonakala ibadass kwaye inyuse umfanekiso wakho. Ukuchonga umsebenzi wobugcisa kubaluleke kakhulu apha, kwaye akonzakalisi kangako njengommandla womzimba.
Ngelishwa, imikhono iyabiza kwaye ifuna ixesha elide inkqubo yokuphilisa ngenxa yobungakanani besikhumba esichaphazelekayo. Kodwa iintlungu zinokuxabiseka nge-inki elungileyo.
Iitatto zamagxa zixhaphake kakhulu kuba uyilo lubukeka lulunge ngokwenyani lubekwe apha kulo naluphi na uhlobo lomzimba. Ifihliwe ngokulula kwaye inomdla, izimvo zetattoo zamagxa zinokwandisa esifubeni nasemva okanye ezantsi engalweni.
Ukusuka kwisilumko ukuya phezulu, fumana i-tattoo yegxalaba ukuba ufuna into emangalisayo efuna i-canvas enkulu.
Iitattoos zesifuba jonga kushushu kwaye kuyathandeka kubantu abaninzi. Ngokukodwa ukuba usebenza, ube nesifuba seetoni, kwaye ufuna i-badass ijonge xa ​​unganxibanga, uyilo lwesifuba esifubeni lunokumangalisa.
Ukusuka kokuncinci kwaye kulula ukuya kwiinkcukacha kumacala omabini esifuba, ngaphezulu kwentliziyo yakho yeyona ndawo ifanelekileyo yento ekhethekileyo.
Umqolo wakho ngowona ndawo inkulu yesikhumba esivulekileyo emzimbeni wakho, uyenza indawo efanelekileyo ye-badass umvambo ongasemva . Unokukhetha i-tattoo esezantsi, ephezulu okanye egcwele umva kwaye uyifihle njengengcali.
Ukuba ufumana itattoo entsha, qalisa ngoyilo oluncinci ukuya kubukhulu obuphakathi kwaye wakhe phezu kwalo ngokuhamba kwexesha. Iitattoo zangasemva zinobuchule obaneleyo bokulawula zonke iintlobo zeembono ezizodwa.
Iimpawu zangaphambili nikeza enye into engenanto engenanto. Kuba umphambili uhlala uhlala ubonakala kwaye uboniswa, lumka malunga nezimvo zakho zoyilo. Nangona kunjalo, i-forearm inokuba sisiqalo sesiqingatha esimangalisayo okanye umvambo opheleleyo womkhono wengalo.
Ukuba awukhathali wonke umntu obona i-inki yakhe, siyaqiniseka ukuba uyakuthanda ukwenza i-tattoo engalweni esezantsi.
Imilenze yakho yindawo engenabuhlungu yokufumana tattoo, kwaye iyamangalisa itattoo yomlenze Ungalisebenzisa eli thuba livulekileyo. Ngoluhlu loyilo lomlenze onokukhetha kulo, gubungela ithanga lakho kunye nethole ngobugcisa obuhle.
Lumka nje ngamadolo kunye neendawo zesikhumba kuba zinokubaluleke ngokukodwa Kubuhlungu .
Iitattoo zethanga zilungele umsebenzi oneenkcukacha ozifunayo kwimilenze yakho ngaphandle kokuncama izinto zoyilo ukuze zilingane. Unokukhetha kwisiqwenga esinye okanye ezininzi ezincinci ukuya kwimifanekiso ephakathi.
Ukongeza, ithanga lakho alibonisi ilanga elininzi ukuze itattoo yakho ingabuni ngenxa yomonakalo welanga njengamanye amalungu omzimba wakho.
Kuyilo oluncinci, olulula, isihlahla sakho yindawo entle ye-inki. Kubonakala kakhulu, ke uya kuba nakho ukubona itattoo yakho nanini na xa ujonga izandla zakho, kodwa ngewotshi okanye ihempe enemikhono emide, nkqu noyilo lwesihlahla esipholileyo sinokugqunywa ngokulula.
Eyona ilungele imiyalezo enentsingiselo okanye yobuqu ekwabelana ngefilosofi yobomi okanye inkuthazo, uyilo lwesandla sokwenza iitattoo luyonwabisa.
Ukufumana umvambo engalweni yakho inokunyangwa ngokufana nokufumana enye emlenzeni wakho. Yindawo entle enendawo evulekileyo kwaye impahla oyinxibayo iya kukuyalela ukuba ibonisa kangakanani.
Ngeetattoo zengalo, unokhetho oluninzi, kubandakanya ingalo ephezulu neyasezantsi, bicep yangaphakathi , triceps, ingalo yangaphandle, igxalaba, kunye nokwahluka kwawo onke amalungu. Into emnandi ngokuqala uyilo lwe tattoo yengalo uhlala unokongeza kuyo kwixa elizayo.
Into enokuqala njengombono omhle we tattoo kwiingalo zakho unokuguqula ube ngumkhono onomdla.
I tattoo yeqatha
Iitattoo ze-Ankle zizonke malunga noyilo oluncinci nolulula. Ukufumana umvambo ojikeleze iqatha lakho akuyonto intle kuba inaliti izakubetha amathambo amaninzi.
Nangona kunjalo, ii-tatoo ezincinci zamaqatha zinokwenza iingxelo ezinesibindi kwaye kufanelekile ukuba unombono opholileyo wokwabelana nehlabathi.
IiTattoo zesandla ziphakathi kweyona ndawo inesibindi sokufumana i-inki. Phantse akunakwenzeka ukufihla, abafana kufuneka bazinikele kakhulu kuyilo lwabo lwe tattoo. Ngapha koko, ii-tatoo ezandleni ziya kufuna ukuchukunyiswa rhoqo.
Ngale nto ithethwayo, izimvo ezigulayo zezandla zakho ziza kuzo zonke iimilo, ubungakanani, kunye nezitayile. Fumana umzobo ofanayo kwizandla zombini okanye uyilo oluncinci kwinto enye. Amathuba awunamda.
Ngokufana nesandla sakho, Iitattoo zentamo kukuzibophelela okukhulu kubomi obunemvambo. Yindawo ebuhlungu kwaye ibonakala kakhulu, ke qiniseka ukuba uyazi kakuhle into oyifunayo ngaphambi kokuba ufumane i-inki.
Ukuba ufuna itattoo yentamo, banokubalasela ekuchazeni umhlathi kunye nokubonisa ubuntu bakho.
Ngaphandle kokuthandwa kwabo okukhulayo, iitattoo zobuso zintle kakhulu kwaye akufuneki zenziwe ngaphandle kokuba sele unamathambo kakhulu.
Nangona kunjalo, kuhlala kumnandi ukuba unakho ukhetho lokufihla i-inki yakho xa kufanelekile. Kodwa ukuba uphuma konke, ke ubuso kunye nentloko yoyilo lwe tattoo ngowona mda wokugqibela.
Iitattoo zerib ziyatsala amehlo kwaye ziyamangalisa, kodwa kunokuba yindawo entle ebuhlungu yokwenza umvambo.
Ngoyilo olupholileyo kunye nomsebenzi ococekileyo, ubuhle bamakhwenkwe ngokuqinisekileyo buyathandeka kwaye buhle.
Eyona Tattoos yaBantu
Ngelixa uyakuhlala kufuneka ukhathalele umvambo wakho kunye inkqubo yokuphilisa unokuba ngumthwalo, ezona tattoos zibalaseleyo kufanelekile ukwaneliseka kwexesha elide ngokubona imibono yoyilo lwakho olupholileyo luphila.
Jonga ingqokelela yethu enkulu yeembono ze tattoo zamadoda ukuba ziphonononge onke amathuba. Ukusuka kuyilo olwahlukileyo kumacandelo athile omzimba kuyilo oluthile olunokubekwa naphina, igalari yethu yemizobo ikugubungele macala onke.
Ndiyalwazi njani uphawu lwam lwezodiac
iinwele ezithandwayo zamadoda
Eyona Shampoos ibalaseleyo ye-DHT